थाहा खबर: ४८३ युवाका सपना विदेशका जेलमा बन्दकी
४८३ युवाका सपना विदेशका जेलमा बन्दकी
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीले कसैको जीवन परिवर्तन गरेको छ भने कसैको संसार नै उजाड बनाएको छ। नेपालीका लागि वैदेशिक राेजगार रहर नभएर बाध्यता हाे।
यस्तै बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीका लागि दुई वर्षअघि कतार पुगेका धादिङका एक युवकको जीवन नै उजाड बनाएको छ। परिवारको आर्थिक अबस्था सुधार्ने सपना बाेकेर कतार पुगेका उनी स्वदेश फर्किन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा जेल परेका छन्।
श्रीमतीसँग मंसिरमा गाउँ फर्किएर बाख्रा पालन गर्ने सपना साटेका थिए। ‘दशा बाजा बजाएर आउँदैन’ भने झै नेपाल फर्कन एक महिना बाँकी हुँदा उनी जेल परे।
शुक्रबार बिदाको दिन थियो। साथीहरूसँग बसेर मदिरा सेवन गरेकाे बेला सामान्य झगडा हुँदा उनले हानेको चाेटले साथी घाइते भए। अस्पताल पुर्‍याउन नपाउँदै साथीको मृत्यु भयो। उनी कतारको जेलमा दिन बताइरहेका छन् भने यता श्रीमती श्रीमानको उद्धारको लागि सरकारी निकाय धाइरहेकी छिन्।
नारायणहिटीस्थित कन्सुलर विभागमा उद्धारका लागि चाहिने कागजपत्र बुझाउन आएकी उनले श्रीमान बिदेशकाे जेलमा पर्दा यता परिवारले भाेग्नु परेकाे दु:ख सुनाइन्।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू कतिपयले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। परिवारकाे पेट पाल्न तथा सन्ततिकाे शिक्षादिक्षाका लागि आर्थिक जाेहाे गर्न विदेशिएका कतिपय नेपालीको सपना विदेशका जेलमा बित्ने गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल चार सय ८३ नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गई जेलमा परेका छन्। मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमन लगायतका जेलमा उनीहरू दिन बिताइरहेका छन्।
बाेर्डका अनुसार मलेसियामा एक सय २३, कुवेतमा ४३, युएईमा एक सय ३६, साउदी अरब जेद्दा २२, साउदी अरब रियादमा एक सय २१, कतारमा ३१, बहराइनमा चार र ओमनमा तीन नेपाली श्रमिक जेलमा छन्।
कसरी जेल पर्छन्?
वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश नेपाली धुम्रपान,मद्यपान सेवन, झै-झगडा, यौनजन्य घटनामा जेल पर्ने गरेको पाइएको छ। सम्बन्धित देशको कानुन नजान्दा पनि कतिपय बिना कसुर जेल पर्ने गरेको कन्सुलर विभागले जनाएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी लागुपदार्थ सेवनमा जेल पर्ने गरेका छन्। महानिर्देशक वलीले मद्यपान सेवन गरी झगडा गर्ने, हत्या हिंसा यौनजन्य घटनामा संलग्न हुँदा नेपाली कामदार विदेशमा जेलमा पुग्ने गरेकाे बताए।
भाषा नजानेकै कारण कैयौं नेपालीले विदेशमा अनाहकमा दुःख पाइरहेको उनले बताए। निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘भाषाको ज्ञान र अन्य सामान्य जानकारी नहुँदा कैयौं नेपाली गन्तव्य मुलुकमा काम गर्दागर्दै जेल पुगेका छन्।’ निर्दाेष अर्थात बिना गल्ति जेल परेकाको उद्धार गरिने उनले बताए।
रोजगारीको खोजीमा विदेश गएकाहरू प्रमाण जुटाउन नसक्दा जेलमा पर्ने गरेको सुरक्षित आप्रवासीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव कृष्ण न्यौपाने बताउँछन्।
उनले भने,‘सम्बन्धित मुलुकको कानुन, नीति नियम नजानेका कारण स-साना घटनामा पनि नेपाली मजदुरले जेल सजाय भोग्नुपरेको छ। कतिपयले कानुनी सहायता नपाउँदा पनि लामो समय जेलमा बस्नुपरेको छ।’
विदेशमा जेल पर्नुका अनेकन कारण छन्। बिना भिसा काम गरेको, ओभरस्टे, चोरी डकैती, अपहरणमा संलग्न रहेको, गालीगलौज तथा अभद्र व्यवहार गरेको, लागुऔषध सेवन र कारोबार र हत्यासम्म लगायतका गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको बुझिएको छ।
त्यसरी जेल पर्नेमा साथीभाइको लहैलहैमा लागेर अनैतिक÷गैरकानुनी गतिविधिमा लाग्नेदेखि रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसारको तलबसुविधा नपाएपछि कम्पनी छाडेर भागेर गैरकानुनी अवस्थामा काम गर्नेसम्मका छन्।
त्यतिमात्र कहाँ हो र, कतिपय सामान्य जानकारीको अभावमा समेत भूलवशः जेल पर्ने गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय गम्भीर अभियोगमा वर्षौंदेखि जेल जीवन बिताइरहेका छन्। अधिकांश गैरकानुनी अवस्थामा काम गर्दा पक्राउ परेकाहरू पाइएको छ।
श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जेल परे राज्यले कानुनी लडाइँ लड्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी निर्देशका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरेको छ।
कसरी गरिन्छ उद्धार?
विदेशका जेलमा रहेका आफन्तलाई उद्धार गर्नका लागि पहिले श्रमिकका आफन्तले कन्सुलर विभागमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा कुन देश गएको, कुन जेलमा,पीडितको पासपोर्ट नम्बर,भिसा, कुन काममा गएको, श्रम स्वीकृति लिए नलिएको, हाल सम्पर्क गर्ने ठेगानालगायत सम्पूर्ण जानकारी खुलाएको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।
यी सम्पुर्ण विवरणसहित कन्सुलर विभागले सम्बन्धित देशको राजदूतावासलाई पत्राचार गर्छ। दुतावासले सो देशमा गएर सम्पूर्ण जानकारी लिइ काम सुरु गर्छन्। नेपालको श्रम सम्झौता भएको मुलुकमा काम गर्नका लागि नियोगमा स्थानीय कानुन जानेका वकिल राखिन्छ।
सामान्य प्रकृतिको घटनामा जेल परेको छ भने दूतावासको कर्मचारीबाट नै उद्धार गर्न सकिन्छ। जसमा खर्च लाग्दैन। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको उद्धार सरकारले गर्ने गरेको कन्सुलर विभागका महानिर्देशक धनबहादुर वलीले बताए। सम्बन्धित देशको वकिल लगाउनु परेको खण्डमा खर्च लाग्ने गर्दछ। जसमा सरकाले खर्च गर्ने विभागले जनाएको छ।
कुन घटनामा कति खर्च लाग्छ भन्ने भन्न सकिदैन। महानिर्देशक वलीले भने, ‘सामान्य घटनामा जेल परेको भए खर्च लाग्दैन। जटिल मुद्दा नै लड्नु पर्ने अवस्थामा खर्च लाग्छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा गई विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूले गल्ति नै गरेको भए पनि नेपाल ल्याउन आफूहरूले पहल गर्ने महानिर्देशक वलीले बताए।
कानुनी सहायताका लागि १५ लाख
वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा विदेशमा रहेका अपराधजन्य गतिविधिमा सहभागी नभए पनि बिना कसुर जेल जीवन भोग्न बाध्य नेपालीलाई सरकारले कानुनी सहायता गर्दै आएको छ।
विदेशी जेलमा रहेका र कानुनी सहायता गर्नु पर्नेलाई प्रतिव्यक्ति १५ लाख रूपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सडक विभागले बनाएका ट्राफिक लाइट बल्दैनन्